Akụkọ - Njikwa ọnụ ụzọ YALIS
YALIS ga -apụta na Interzum@home 2021
N'ihi mmetụta COVID-19, a gbanwere Koelnmesse biennial ka ọ bụrụ igwe okwu dijitalụ Koelnmesse. Interzum@ụlọ ga -eme site na 04. ruo 07.05.2021. Na interzum@ụlọ, ihe karịrị ụlọ ọrụ 140 sitere na mba 24 ga -eweta ngwaahịa na ọrụ ha na nyiwe dijitalụ Koelnmesse.
YALIS Design bụ onye nrụpụta ama ama ama ama ama ama aka ụzọna ngwa ngwaike ọnụ ụzọ maka ọnụ ụzọ. N'ọnwa Mee 2019, YALIS sonyere na ihe ngosi Koelnmesse na -anọghị n'ịntanetị, ndị ahịa wee jiri otu obi wee mara ya. Yabụ, YALIS ga -esonye na Koelnmesse dijitalụ 2021 wee gaa n'ihu na -ewetara ndị ahịa ngwaahịa na ngwọta kachasị ọhụrụ.
Kedu ka ị ga -esi chọta YALIS na interzum@n'ụlọ?
Banye na interzum@home digital platform: ụlọ.interzum.de ịdebanye aha.
Chọọ "YALIS"Ma ọ bụ"Nhazi YALIS”Na ụlọ.interzum.de ịchọta anyị.
Na interzum@dijitalụ dijitalụ, ị nwere ike chọgharịa ozugbo na ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ, ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị, ma ọ bụ ị nwere ike ịme oge ka gị na anyị nwee nzukọ. Anyị na -atụ anya izute na ịgwa gị okwu na interzum@ụlọ dijitalụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko zitere anyị email na info@yalisdesign.com ma ọ bụ hapụ anyị ozi na weebụ, anyị ga -aza gị n'ime awa 24
YALIS Kere, ọkachamara n'ọkara dị elu ngwọta ngwaike ụzọ soplaya.
Oge ezipụ: Apr-30-2021